Moto G4 Plus, famakafakana ary hevitra aorian'ny fampiasana iray volana | Androidsis
Nahazo ny fianakaviany i Motorola Moto G asio marika alohan'ny sy aorian'ny tsenan'ny telefaona amin'ny alàlan'ny fanolorana telefaona tena feno amin'ny vidiny mirary. Fantatr'i Lenovo fa taorian'ny fahombiazana an-tsena an-taonany maro dia nila fanovana ny G range, noho izany ny tsy nampoizina nomeny rehefa nanolotra ny Moto G4 sy Moto G4 Plus.
Namoaka a famerenana tanteraka ny Moto G4, tonga izao ny fotoana hanaovana a famakafakana video an'ny Moto G4 Plus, ny kinova vitamina amin'ity taranaka farany ity izay miavaka amin'ny sensor sy ny fakantsary mahery.
1 Moto G dia mahatonga ny fitsambikinana ho 5.5 santimetatra, fahombiazana tanteraka
2 Volavola iray mitazona ny tsipika maodely teo aloha
3 Toetra mampiavaka ny Moto G4 Plus
4 Fampisehoana miavaka
6 Moto UI no interface tsara indrindra hitanao
7 Fakan-tsary matanjaka be izay manome valiny mahatalanjona
7.1 Galeria sary fakantsary Moto G4 Plus
Moto G dia mahatonga ny fitsambikinana ho 5.5 santimetatra, fahombiazana tanteraka
Ny vaovao Moto G4 Plus dia mikendry ny ho safidy voalohany indray rehefa mitady telefaona Android tsara amin'ny resaka sandan'ny vola. Ny fanomezan-dàlana azy dia manondro fa ny Motorola / Lenovo dia mamerina azy io amin'ny alàlan'ny findainy vaovao, na dia mety tsy tian'ny mpampiasa sasany aza ny haben'ny efijery mitombo.
Marina izany ny tsena dia mikendry hatrany ny efijery lehibe, indrindra ao anatin'ny elanelam-potoana vaovao avo lenta izay ny terminal dia miloka amin'ny efijen'ity habe ity. Ity hetsiky ny Lenovo ity dia miteraka mpampiasa finday marobe misy efijery 5 santimetatra farafahakeliny, ary izay nisafidy ny làlan'ny Moto G teo aloha, dia mitady vahaolana amin'ireo mpanamboatra hafa.
Ny ratsy kely kely izay tsy eritreretiko dia manimba ny varotra Moto G4 Plus. Mpampiasa maro no zatra amin'ny efijery lehibe kokoa, ary ny kalitaon'ny efijery, fakan-tsary ary sensor ho an'ny fantsom-panaovan-tsoratra no mahavita an'io fitomboan'ny habeny io.
Ny tsy azoko dia ny zava-misy, na dia ny maodely teo aloha aza dia nanana fanamarinana IPX izay nanome ny fanoherana Moto G ny vovoka sy ny rano, na ny Moto G4 na ny Moto G4 Plus tsy mahazaka afa-tsy ny famafazana sy ny famaohana izy ireo. Izaho manokana dia mihevitra ny fanoherana ny vovoka sy ny rano zava-dehibe iray izay afaka mamonjy anao amin'ny tsy ampoizina tsy mahafinaritra, indrindra amin'ny fahavaratra miaraka amin'ireo finday rehetra eny amoron-dranomasina na pisinina.
Volavola iray mitazona ny tsipika maodely teo aloha
Motorola dia nisafidy a famolavolana fitohizana izay mitazona ireo tsipika mampiavaka hita tamin'ny taranaka Moto G teo aloha ireo, na dia misy aza ny fiovana sasany. Fiovana manaitra tokoa no tonga amin'ilay "M" lehibe miorina amin'ny faritra fakantsary mamela ilay fitaovana ho fantatra ho telefaona Moto.
Toy ny maodely teo aloha, ny Moto G4 Plus dia manana vatana vita amin'ny polycarbonate eo akaikin'ny fefy izay maka tahaka ny aliminioma, na dia mbola plastika aza. Ny zavatra tsara amin'ity fitaovana ity dia ny fanohanana ny jogging isan'andro tsy misy olana be loatra. Nampiasa ny telefaona nandritra ny iray volana aho nefa tsy nisy karazana fonony ary, na dia izany aza dia niaritra gorodona sasany noho ny fianjerany sy ny dona tsy nahy, nitazona tsara ny terminal.
Ny finday koa dia natsipy tsy nahy tamina tany mikitroka tamin'ny haavon'ny 1.5 metatra. Ny zavatra voalohany noeritreretiko dia ny triatra tokony ho vaky, saingy nesorina ny sisin-tsoroka izay nisy fahasimbana tamin'ny fikororohana ny plastika izay nitovy tamin'ny aliminioma, mba hilazana fa raha tsy izany dia tsy nisy simba ny telefaona.
Ny lanjan'ny 155 grama dia mahatonga ny Moto G4 Plus dia telefaona tena mora ampiasaina. Mariho fa, na dia manana efijery 5.5-inch aza izy, Lenovo dia nanatsara tsara ny haben'ny telefaona nahatonga azy hampiadana tsara. Mazava ho azy fa mila tanana roa ianao hiditra amin'ny teboka lavitra indrindra amin'ny efijery.
Eo amin'ny ilany ankavanana dia hitantsika ny bokotra on na tsy mandeha an-telefaona ankoatry ny bokotra fanaraha-maso. Ny bokotra herinaratra dia vita amin'ny aliminioma ary manana fahasamihafana hafa amin'ny fanalahidy fanaraha-maso ny volume, mba hahafahanao manavaka azy ireo tsy mijery. Ny pulsation dia manolotra fanoherana mihoatra ny ampy, manome fahatsapana faharetana.
Ny efijery dia mitana ny 71% amin'ny ampahany anoloana, Izy io dia misy mpandahateny sy fakan-tsary eo aloha eo amboniny ho fanampin'ny mpamaky ny rantsantanana ambanin'ny efijery. Ny tenako manokana dia aleoko fakan-tsarimihetsika iray ao ambadik'izany, araka ny hitantsika amin'ny telefaona hafa toa ny ZTE Axon Mini na ny Huawei P9, na dia eo amin'ny tsiro ny loko.
Farany any aoriana dia ho hitantsika ny fakantsary lehibe an-telefaona ankoatry ny logo Motorola. Mariho fa azo esorina ny fonony aoriana, izay ahitantsika ny slot ho an'ny karatra SIM micro sy slot micro SD card, na dia raikitra aza ny bateria. Tena ratsy ny Moto Maker mbola tsy tonga tany Espana hanamboatra ny fonony aoriana amin'ny Moto G4 Plus.
Aorian'ny fampiasana iray volana dia azoko lazaina izany ny Moto G4 Plus dia telefaona mora ampiasaina izay manolotra fikasihana mahafinaritra, ho fanampin'ny fandanjalanjana tena tsara mamela ny fampiasana mafy tsy misy olana be loatra.
Toetra mampiavaka ny Moto G4 Plus
lafiny X X 153 76.6 9.8 MG
efijery IPS 5.5-inch miaraka amina vahaolana 1920 x 1080 pixel ary 401 dpi miaraka amin'ny fiarovana Corning Gorilla Glass 3
processeur Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 valo fotony (core Cortex A-53 efatra amin'ny 1.5GHz ary core Cortex A-53 efatra amin'ny 1.2 GHz)
Tahiry anatiny 16 GB azo ovaina amin'ny alàlan'ny MicroSD hatramin'ny 256 GB
Fakan-tsary aoriana 16 megapixel sensor miaraka amin'ny autofocus / detection face / panorama / HDR / Dual LED flash / Geolocation / 1080p video recording amin'ny 30fps
Fitaovana hafa Fanoherana fanoherana / rafitra fiampangana haingana / fantsom-pifandraisana
bateria 3.000 mAh tsy azo esorina
vidiny 269 euro amin'ny Amazon
Ny Moto G4 Plus dia lasa ampahany amin'ny eo anelanelan'ny - avo ny sehatra manolotra toetra ara-teknika miavaka kokoa. Ny finday dia terminal mpamadika tena isan'andro, zavatra antenaina mahita ny mampiavaka azy ara-teknika.
Ary i Motorola no nisafidy tsara tamin'io lafiny io, miloka amin'ny iray amin'ireo vahaolana mahavanon-doza indrindra an'i Qualcomm, ilay mahery Snapdragon 617, SoC iray izay mihoatra ny fanatanterahana ny asany ary, miaraka amina Adreno 405 GPU sy 2 GB an'ny memo RAM, mamela anao hankafy ny lalao rehetra amin'ny fomba tena mandeha sy miasa.
Ao amin'ny lahatsarin'ilay famakafakana Moto G4 dia ho hitanao fa nanandrana kilalao horonantsary samihafa aho izay mitaky hery mahery vaika ary afaka nankafy azy ireo tsy nisy olana aho. Tsy nisy fotoana niaretako fiatoana na lagy teo am-pilalaovana. Y Tsy misy soritry ny hafanana be loatra amin'ny terminal.
Araka ny efa nampoizina, ny fahombiazany dia tsy mitovy amin'ny an'ny avo lenta, toa ny Galaxy S7, fa ny lny tsipika izay manasaraka ny processeur premium indrindra amin'ireo SoC miorina amin'ny terminal mid-range dia mihamalefaka ary ny Herinaratra Moto G4 dia ohatra mazava amin'izany.
Ny iray amin'ireo teboka izay tena nahagaga ahy indrindra dia ny fananan'ny Moto G4 FM Radio Ary azo ampiasaina tsy misy headphones ho antena izy, raha mbola eo amin'ny faritra avo lenta isika, zavatra tiako izany. Tsy azoko hoe ahoana ny fahaizan'ny telefaona mbola eny an-tsena tsy misy FM Radio satria amiko dia iray amin'ireo fitaovana ilaina indrindra amin'ny telefaona izany.
Ary tsy afaka manadino azy aho sensor ho an'ny rantsantanana. Tena gaga aho tamin'ity lafiny ity satria miasa tanteraka ny mpamaky, miaraka amin'ny hadisoana farafahakeliny ary mahafantatra ny dian-tànana isaky ny zoro. Efa nolazaiko taminao fa tsy misy zavatra tokony hialona ireo mpamaky ny dian-tanan'ny terminal avo lenta.
Farany te-hanasongadina ny mpitondra tenin'ny Moto G4 Plus; manolotra kalitaon'ny feo tena tsara ary ny toe-javatra misy azy dia manakana antsika tsy hametaka tampoka ny output audio rehefa milalao lalao.
Ny mpanamboatra dia miloka mafy amin'ity sehatra ity amin'ny alàlan'ny fanolorana a Efijery 5.5 inch miaraka amin'ny kalitao izay ambony lavitra noho ny mpifaninana rehetra eo aminy. Tian'i Motorola ho tonga lafatra ny traikefan'ny mpampiasa amin'ity lafiny ity, ary miloka tanteraka amin'ny a Tontonana IPS mahatratra 1.920 1.080 x XNUMX teboka ary 401 teboka isaky ny santimetatra.
Ny kalitaon'ny Moto G4 dia tsara, manome sary an-tsary tena tsara miaraka amin'ny loko voajanahary ary tsy misy saturation. Tonga lafatra ny fotsy, izay mahatonga ny Moto G4 ho terminal tena atoro anao ho an'ny famakiana misaotra ihany koa ny hakitroky ny pixel avo. Mariho fa amin'ny fametrahana ny famirapiratany farafaharatsiny, afaka mamaky teny tsara eo am-pandriana ianao, nefa tsy manelingelina ny jiro amin'ny efijery. Ny efijery Moto G4 Plus dia manolotra vitsivitsy zoro mijery tsara ary mifanohitra marina, miampy ny haavon'ny hazavana eo amin'ny efijery Moto G4 ahafahantsika mahita izay atiny ivelany tsara, na dia amin'ny antoandro be aza.
Iray amin'ireo efijery tsara indrindra hita amin'ity sokajy vidiny ity ary mahatonga ny Moto G4 Plus ho telefaona tena lehibe hodinihina, indrindra ho an'ireo izay maniry Ankafizo ny lalao video sy ny atiny multimedia amin'ny efijery tsara kalitao nefa aza manapotika ny banky manandrana.
Raha mahazo naoty tsara eo amin'ny sehatry ny efijery ny Moto G4 Plus, dia tokony hanome avo ihany koa ny fizakan-tenany. Ary izany ve ilay Bateria 3.000 mAh Tamin'ilay telefaona vaovao dia nahagaga ahy ny nanolotra fampisehoana tena tsara.
Fanomezana ara-dalàna ny Moto G4 Plus Nahatratra roa andro ny fampiasana ahy tsy nisy olana, zavatra mahagaga raha jerena ny efijery 5.5-inch misy ny vahaolana Full HD. Miresaka momba ny fampiasana marina ny fivezivezena amin'ny Internet aho, amin'ny fampiasana tambajotra sosialy, fihainoana mozika mandritra ny adiny iray isan'andro ... fametrahana ny telefaona amin'ny maody fiaramanidina amin'ny alina sy fanidiana ny fampiharana, ny Moto G4 dia niaritra iray andro manontolo ho ahy , tonga ny alina faharoa tamin'ny 10 -15% ka, manisa fa misy andro ampiasantsika ny telefaona bebe kokoa, dia afaka manome azy ny fahaleovan-tena maharitra 42 ora isika.
Zavatra tsy ampoizina ho an'ny telefaona manana ireo toetra ireo. Ny ankamaroan'ny trosa dia mankany amin'ny Snapdragon 617 SoC, mpikirakira tena mahay mandanjalanja izay, araka ny hitako, dia manome fahombiazana tena tsara nefa tsy mihinana tafahoatra.
Na dia marina aza fa ny Moto G4 Plus dia tsy manana fifandraisana USB Type-C vaovao, mitazona ny micro USB any ambany, dia dia mifanaraka amin'ny rafitra famahanana haingana an'ny Qualcomm. Ho fanampin'izay, ny boaty dia efa miaraka amina charger mifanaraka amin'ity haitao ity, ahafahany manana fizakantena mitokana eo anelanelan'ny 15 sy 5 ora ao anatin'ny 7 minitra, arakaraka ny fampiasana nomena. Ary afaka adiny iray mahery dia ho voaloa avokoa izany.
Moto UI no interface tsara indrindra hitanao
Halako ny interface manokana. Tsy azoko hoe maninona ny mpamokatra no mamorona sosona ratsy toy izany. Na dia Motorola sy ny interface tsara dia maningana izay manaporofo ny fitsipika. Ary i Motorola dia miloka amin'ny interface madio tokoa, tsy toy ny mpanamboatra hafa. Amin'izany no ahitantsika Moto UI, miorina amin'ny Android 6.0 M ary izany dia mitazona io traikefa amin'ny Pure Android izay tena tian'ny besinimaro io.
Ny interface amin'ny ankapobeny io dia mitovy amin'ny google na dia nampiditra fikitika manokana aza i Motorola izay tsy manelingelina mihitsy. Azontsika jerena ao amin'ny widget amin'ny famantaranandro ohatra, fa tiako ny hampazava azy mazava fa tsy miditra an-tsehatra mihitsy. Mba hanomezana hevitra anao, ny fonosana Google Play iray manontolo dia tsy napetraka mialoha ho fenitra akory.
Aiza no hahitantsika fahasamihafana bebe kokoa? amin'ny Ambient Display, Rafitra fampandrenesana tena tsara an'ny Motorola izay hampiseho amintsika ny ora sy fampandrenesana amin'ny faran'ny mainty rehefa maka ny terminal. Etsy ankilany Motorola dia nampiditra andianà fihetsika tena ilaina sy intuitive. Ohatra, raha manetsiketsika kely ny Moto G4 ianao dia hovelomina ny fakantsary. Ao amin'ny famakafakana video dia ho hitanao fa mora ny manararaotra ireo safidy ireo amin'ny telefaona.
10 ho an'ny Motorola ato amin'ity fizarana ity. Tsy misy tsara kokoa ho an'ny mpampiasa noho ny telefaona manadio fako ary ny Moto G4 dia manao an'izany tanteraka.
Fakan-tsary matanjaka be izay manome valiny mahatalanjona
Ho ahy ny fakan-tsary dia eo akaikin'ny efijery ny faritra manan-danja indrindra amin'ny telefaona. Ary ny Moto G4 Plus indray dia miavaka amin'ity lafiny ity noho ny sensor Omnivision OV16860 16 megapixel 1 / 2,4 santimetatra. Miaraka amin'ny alàlan'ny elnte f / 2.0 aperture sy ny tselatra feo misy feo roa, manome fahombiazana tena tsara izy ireo.
Asongadino ny tamin'ny laser ampiasaina hanampiana ny fifantohana ary izany koa dia miasa ho toy ny rafitra detection mifanohitra. Amin'ity lafiny ity, misongadina ny Plus, manome fifantohana haingana amin'ny toe-jiro mety, ary koa ny fakana haingana ny tifitra. Indraindray manjary mikatso ny fifantohana amin'ny fanekena ny sary, saingy mila manisy marika ny teboka indray isika amin'ny alàlan'ny fikasihana hamahana ilay olana.
La tsara ny kalitaon'ny sary, manasongadina ny fahazavana lehibe an'ireo sary nalaina, manome feo ambany sy mazava tsara amin'ny toe-jiro tsara, fakana loko miloko voajanahary.
Raha mamela ny Mode HDR mavitrika, mihoatra ny indray mandeha dia hamonjy anao amin'ny fatorana amin'ireo toe-javatra manjavozavo ireo. Ny fakantsary Moto G4 Plus dia tsy manana mpampiorina sary, noho izany dia normal ny fisehoan'ny tifitra mangovitra amin'ny hazavana ambany. Zavatra antenaina amin'ny telefaona afovoany.
Raha fantatrao koa ny sary dia hankafizinao ilay mode manual hahafahanao manova ny masontsivana isan-karazany toy ny fampisehoana, ny famirapiratana, ny fifandanjana fotsy ... Raha tsy mila olana ianao dia aza manahy fa ny fakantsary fakantsary intuitive dia hamela anao haka sary haingana miaraka amina kalitao tena tsara. Na dia amin'ny fihetsika tsotra ataon'ny tananao aza dia azonao atao ny mampihetsika ny fakan-tsary haka sary haingana.
Una Fakan-tsary tena feno ary namela tsiro be teo am-bavako, bebe kokoa raha raisintsika ny elanelan'ny Moto G4 Plus sy ny vidiny novaina. Farany dia avelako miaraka amin'ny galerià sary nalaina niaraka tamin'ny Moto G4 Plus ianao mba hahitanao ny fomba fiasan'ny fakantsarinao
Galeria sary fakantsary Moto G4 Plus
Motorola sy Lenovo dia nanao asa tena tsara tamin'ny Moto G4 Plus. Tsy tiako fa nesorin'izy ireo ny fanoherana ny vovoka sy ny rano, na dia nanatsara tanteraka ny mpikambana vaovao indrindra amin'ny fianakavian'i Moto G aza ny fampiroboroboana ny fampirantiana sy ny fantsom-paritra.
Raha raisintsika ny kalitaon'ny efijery, ny sensor sensor, ny fakantsary mahery ary ny Moto G4 Plus dia efa misy charger mifanentana amin'ny rafi-pandehanany haingana dia ity finday ity no iray amin'ireo vahaolana tsara indrindra raha tadiavinao. telefaona antonony - avo lenta ary avo tsy mihoatra ny 300 euro.
Seho iray misy fampisehoana tena tsara
Ny fakantsary Moto G4 Plus dia manolotra fakana sary tena tsara
Ny sensor an'ny dian-tànany dia hatramin'ny farany tsara indrindra eny an-tsena
Tsy manana fanoherana vovoka sy rano toy ny maodely teo aloha
Vita ny polycarbonate, raha efa mampiasa aliminioma ireo fantsona hafa ao amin'ilay faritra
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Moto G4 Plus, famakafakana ary hevitra aorian'ny fampiasana iray volana
VideoNews dia hoy izy:
Ny fomba vaovao hahazoana recharge elektronika, Cards Gift ary maro hafa, sintomy ity app bit.ly/RecompensApp
Mamaly amin'ny VideoNoticias
Hatramin'ny mto voalohany nataoko dia efa eo amin'ny fahatelo aho, tsy isalasalana fa ho avy manaraka ahy izany
Telefaona tena tsara, ananako izy io ary manaitra, tsy diso.